KHITSOE MEMO (ခေတ်စိုးမှတ်စု): January 2013
On September7and 8, in Yangon, the Japan Foundation, Bangkok and the Embassy of Japan co-hostedaconcert of Japanese Koto and Flute. The three visiting Japanese musicians, Mr.Hiroshi Matsushima(Flutist), Ms.Noriko Tsuboi(Koto player) and Ms.Keiko Suzuki(Koto Player), all of them currently residing in Bangkok, demonstrated the beauty of Japanese music by playing both tradtional and modern pieces. In two days, around four hundered people enjoyed this rare oppotunity to experience both sensitive and powerful tunes flowing from Koto (Japanese traditional harp)and Flute
.Altogether, the musicians played six pieces, one of which was "Midnight Rain" by an American Koto player, Elizabeth Falconer. This clearly indicates that the beauty of the sound of Koto is something universal, which transcends the boundary of traditional Japanese music. One of the audience,ayoung Myanmar student sent comments on this piece to the Embassy. She wrote, "As soon as this particular piece started, I heard the sound of rain instead of the sound of Koto. I heard various kinds of rain, sudden rain, heavy rain, thunder and wind. Through this concert, I came to like Japanese music very much."After the concert, the audience had the chance to interact with the three musicians. The Myanmar audience had many questions to ask such as how Koto is played, what kind of music scores they use, how many years they have been praciticing to reach professional level. Some famous Myanmar musicians were also included among the audience.The concert wasasuccess inasense that the music loving Myanmar people became interested in Japanese music and its unique instruments and that Myanmar and Japanese people were able to understand each other directly through universal language, namely music.
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:37 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:31 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:02 AM No comments:
The Embassy of Japan with cooperation of the Ministry of Information of the Union of Myanmar, held special shows of the first Japan-Myanmar collaboration film "Thway".
The film is based onabestseller novel "Thway", written byawell-known writer Journal Gyaw Ma Ma Lay.The film was directed by Mr. Koji Chino, one of the masters of modern Japanese film world, who has devoted his passion to developing friendship between Myanmar and Japan, and it was casted by Japanese and Myanmar actors and actresses including Myo Thanda Tun（Ma Thwe Thwe）, Min Maw Kun（Maung Maung）, Akari Asou（Yumi Yoshida）, and Toshiyuki Nagashima（Toshio Yoshida）.
Yumi,aJapanese university student happenes to know one day that she hasayounger brother（Maung Maung）in Myanmar who was born between her father, Toshio Yoshida andaMyanmar mother, Ma Thwe Thwe. Toshio wasaformer Japanese soldier sent to Myanmar during the World War Ⅱ. Brought by destiny, Yumi decides to visit Myanmar and to meet her younger brother, Maung Maung. Despite many difficulties, she can finally meet Maung Maung. But････
*This film is Japanese/Myanmar language version with Myanmar subtitle.
Posted by Khinsoe Myanmar at 3:36 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 5:48 PM No comments:
ကမ္ဘာကျော် ၀ိပဿနာ တရားပြ ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂာာ၏ "ဓမ္မနိုင်ငံမှာ ၁၃၅ နှစ်ကြာ/135 Years In Dhamma Land" ဓမ္မဟောပြောပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့၂၀၁၂ ညနေ ၅နာရီ မိနစ် ၃၀ အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားဇာတ်ရုံ၌ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂာာ၏ ဓမ္မဟောပြောပွဲသို့ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ ပရိတ်သတ် ၃ ထောင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပြီး ည ၈နာရီ ၀န်းကျင်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဓမ္မဟောပြောပွဲတွင် ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာမှ ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများကို ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသောပရိတ်သတ်များမှ မေးမြန်းသော မေးခွန်းများကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Khinsoe Myanmar at 5:11 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:58 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:41 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:38 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:30 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:17 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:11 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:01 AM No comments:
ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပွဲတော်ကနေ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရရှိခဲ့
မေစန္ဒီ-အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၅၅ ( ၃ - ၉ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၂)
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက ဦးစီး ကျင်းပတဲ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် Yangon Photo Festival ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားနဲ့ ဆုရဓာတ်ပုံတွေ အတွက် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က ဌာနမြက်ခင်းပြင်မှာ ကျင်းပခဲ့ရာ ပထမဆုကို ဦးမျိုးသိန်း၊ ဒုတိယဆုကို မဆိုင်းမိုင်နဲ့ တတိယဆုကို Ms. Amelie Chai Shwe တို့ရရှိခဲ့ပြီး တခြားဆုတွေကိုတော့ မဖြူဖြူသင်း၊ မစန္ဒြာမြင့်၊ ကိုထွန်းထွန်းအေး၊ ကိုဖြိုးဟန်၊ ကိုမျိုးကျော်လွင်၊ မမူမူ၊ ကိုမင်းဇေယျာနဲ့ ပီကေတို့က ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး Mr. Thierry Mathou ၊ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ ဒါရိုက်တာ Mr. Febrice Etienne ၊ ဓာတ်ပုံပညာရှင် Christophe Loviny နဲ့ အခြားနိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး အကဲဖြတ်ရွေးချယ် ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အုတ်သဲကျောက်လုပ်ငန်းက၊နေ့စား အလုပ်သမားကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ဘ၀ကို မြင်ရသူတွေ ကရုဏာစိတ်၊ ကိုယ်ချင်း စာစိတ်ဖြစ် အောင် ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ ပထမဆုရှင် ဓာတ်ပုံဦးမျိုးသိန်းက သူရဲ့ ဒီကလေးအပေါ်ထားရှိတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာမေတ္တာကြောင့် အခုလို ပထမဆုကို ရခဲ့တာပါလို့ ဆုလက်ခံယူအပြီးမှာ မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အုတ်သဲကျောက်လုပ်ငန်းကို သွားတိုင်း အဲဒီဝန်းကျင်ထဲမှာနေတဲ့ ကလေးတွေကိုမြင်တိုင်း စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။သူတို့အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရေခဲချောင်းစားချင်ရင် ရေခဲချောင်းဖိုးပေးတာကလွဲလို့ ဘာမှ ပိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ "နောက်တော့ ကျွန်တော့အလုပ်က ဒီမှာ ဓာတ်ပုံသင်တန်းလာတက်ခိုင်းတဲ့ အခါ အဲဒီကောင်မလေးကို သွားရိုက်ပြီးတော့ ပြလိုက်တာပါ။ ကောင်မလေးက ဆင်းရဲတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ဘ၀ကို သူပျော်တယ်။ သူဘာကြောင့်ပျော်သလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် အင်တာဗျူးတယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုသီချင်းဆိုပြတယ်။ ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ သံသယ ဖြစ်တယ်။ ဆင်းလည်းဆင်းရဲတယ်။ ဘာလို့ပျော်နေလဲ။ ဒါက လွတ်လပ်ခြင်းပဲ"လို့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်တဲ့ ဦးမျိုးသိန်းက ပြောပါတယ်။
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှဒါရိုက်တာ Mr. Febrice Etienneက ဦးမျိုးသိန်းရဲ့ ဖိုတိုအက်ဆေးဟာ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အင်တာဗျူး နဲ့ စထားပြီး သူရဲ့သီချင်း ငြီးသံနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့ တင်ဆက်မှုဟာ ဆုပေးပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲကို တမြေ့မြေ့နဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့စေတာကြောင့် ဒိုင်အဖွဲ့ရဲ့ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပထမဆုအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တယ် လို့ ပြောပြပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစပြီး ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနရဲ့ပင်တိုင်ဓာတ်ပုံနည်းပြအဖြစ် သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံပညာရှင် Christophe Loviny ကလည်းပွဲအတွက် နေ့ရောညပါ ပင်ပန်းခဲ့ရပေမယ့် နောက် ဆုံးမှာတော့ အင်မတန်အင်အားပြင်းထန်တဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရလာ ခဲ့တယ် လို့ ပြောပါတယ်။
"သူတို့ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျက အင်မတန်ကို ပြင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပဲ တချို့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ဂရုဏာသက်မိပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းကတော့ ဘယ်သူမဆို ပြီးရင်ရသွား မှာပဲ။ အဓိကကိုယ်ပြတဲ့ အကြောင်း အရာက လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ စွဲကျန် ခဲ့ဖို့ပဲ"လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကို နှုတ်ဆက်စကား ဆိုခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း ... "အင်မတန် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အတွေ့ အကြုံ တစ်ခုပါ။ အရမ်းကိုလှတဲ့ ဖိုတို အက်ဆေးတွေကို မြင်တွေ့ရသလို၊ လူငယ်တွေဆီမှာ ပါရမီဘယ်လောက် ရှိလဲဆိုတာလည်း သိလိုက် ရပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီနေ့အကဲဖြတ်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အင်မတန်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ ဘ၀ကိုပုံဖော်နိုင်မယ့် လူငယ်တွေ ပါဝင်နိုင်တဲ့ ဒီလိုပွဲမျိုး နောင်မှာ ဒီထက်ပိုပြီးကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်ပါတယ်" လို့ ပြော သွားပါတယ်။
Posted by Khinsoe Myanmar at 3:54 AM No comments:
ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားဖျော်ဖြေပွဲ
ငြိမ်းအိအိထွေး-အတွဲ ၂၆ ၊ အမှတ် ၅၂၀ ( ၃-၉ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၁)
TALအဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု ပြကွက်တစ်ကွက်။ ဓာတ်ပုံ - ကောင်းထက်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ တိုက်ကွမ်ဒိုနဲ့ ခေတ်ပေါ်အက ပေါင်း စပ်ထားတဲ့ TALအဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာလှည့်ဖျော် ဖြေရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ဇာတ်ရုံမှာ ကပြပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ၀က်ဝက်ကွဲ အားပေးမှု လက်ခုပ် သံကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြင်နေကျတိုက်ကွမ်ဒိုပြကွက်ဟန် ပန်တွေနဲ့ မတူဘဲ ဇာတ်လမ်းဇာတ် ကွက်ပေါ်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ TAL အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုအဖွင့်က ရှေး ခေတ်ဝတ်စုံဝတ် တိုက်ကွမ်ဒို ဆရာကြီးနဲ့ တပည့်ကျော် နှစ်ယောက်၊ နောက် တန်ခိုးရှိတဲ့ ဓာတ်လုံး၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ခါးစည်းခါးပတ်ဖြူနဲ့ အတူ တိုက်ကွမ်ဒိုလောကရဲ့ အတော်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ စတင်ပါတယ်။
ဒေါသပြင်းပြင်းနဲ့ တပည့်ကျော်က အနီရောင်ဝတ်စုံ၊ အနီရောင်အဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အပြာရောင်ဝတ်စုံဝတ် အဖွဲ့ကတော့ ဆရာကြီး ရဲ့ခါးပတ်ဖြူ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူပါ။ ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ အနီရောင်ဝတ်လူစုက မျက်နှာဖုံးကို ရအောင်ယူသွားသလို အပြာ ၀တ်လူငယ်ကို လည်း ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်အောင် လှပတဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုတိုက်ကွက်တွေနဲ့ ဖန်တီးသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး မှာတော့ နှစ်ဖွဲ့စလုံး အပြန်အလှန်နားလည်မှုရပြီး ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းနဲ့ အဆုံး သတ်သွားပေမယ့် ကြားချိန်တွေမှာ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုစွမ်းရည်၊ ကိုရီးယားမိန်းမငယ်လေးတွေရဲ့ ယပ်တောင်အကအလှအပြင် ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ချိန်မှာ ပါဝင် ကပြတဲ့ ခေတ်ပေါ်ဘီဘွိုင်းအကတွေကလည်း ကပြချိန်တစ်နာရီခွဲသာသာ အတွင်းမှာပရိသတ် မျက်တောင် မခတ် နိုင်အောင် ဖမ်းစားခဲ့ပါတယ်။ "ကပြသူတွေ မျက်နှာဖုံးတပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ ကြောင့်ပါ။ အဓိပ္ပာယ်က မျက်နှာဖုံးအောက်မှာ ဘယ်လိုဒေါသ ထွက်ဝမ်းနည်း၊ ပူလောင်မှုတွေရှိပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်တွေ အကုန်လုံး တစ်သားတည်း ပြုံးရယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့၊ တစ်စိတ်တည်း တစ်ဝမ်းတည်းဆိုတဲ့သဘောကို ဖော် ဆောင်တာပါ"လို့ ကိုရီးယားတိုက်ကွမ်ဒို အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာဟွန်ဂျွန်ဖြိုးက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောပါတယ်။
"ရှေးဟောင်းကိုရီးယားရိုးရာ တိုက် ကွမ်ဒိုတိုက်ကွက်တွေရဲ့မူကို မပျောက် စေဘဲ ခေတ်ပေါ်ကကွက်တွေကို ပေါင်း စပ်ရတဲ့အတွက် ပရိသတ်လက်မခံမှာ အရမ်းကို စိတ်ပူရပါတယ်။ အခုတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံအပြင် ပရိသတ်တော်တော် များများကပါ လက်ခံအားပေး ကြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ ခေတ်ပေါ်နဲ့ ရှေး ဟောင်းတိုက်ကွက်တွေ တီထွင်စမ်းသပ် နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို မြန်မာလူမျိုးတွေ လည်း တစ်နေ့ လုပ်နိုင်မှာ သေချာပါ တယ်"လို့ ပြောပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၄၀ နီးပါးရှိတဲ့ TAL ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေတဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုအက အဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ နိုင်ငံမှာသွား ရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး အခု ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှာ ဗီယက် နမ်၊ ထိုင်း၊ စပိန်နဲ့ ပြင်သစ် စတဲ့ နိုင်ငံတွေကို သွားရောက်ဖို့ လျာထား တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Khinsoe Myanmar at 3:19 AM No comments:
Posted by Khinsoe Myanmar at 3:06 AM No comments:
Japanese Traditional Dance & Music Performance/ Japanese Food & sake presentation
The Embassy of Japan in cooperation with Yangon Japanese Association
presented the performance of Japanese traditional Dance & Music at
Park Royal Hotel, Yangon on October 22, 2011.
This event was organized to express appreciation for the generous
support offered to Japan after the Great East Japan Earthquake form
the people of Myanmar and to show Japan’s will and strength towards
the reconstruction from the aftermath of the earthquake.
At this event, professional artists of International Dance Club and
Minyo Umewaka-kai performed various Japanese traditional dances and
folk music including pieces originating from eastern Japan. Beautiful
IKEBANA (Japanese traditional flower arrangement) by U George San Tun
and photographs by JENESYS Alumni Network with their wishes, prayers
and support to Japan were also exhibited. The audience also enjoyed
watching KAMISHIBAI (Japanese picture storytelling) regarding disaster
prevention and tasted Japanese foods and sake after the performance.
In total 460 people came and there was much heated atmosphere.
The success of this event hopefully gives momentum to strengthen not
only the mutual friendship between Japan and Myanmar but also Japan’s
reconstruction from the aftermath of the earthquake.
Posted by Khinsoe Myanmar at 2:37 AM No comments: